Noloshu aad bay u macaan tahay. Murugo ayey ku qaadataa in la ogaado waxa farxaddu tahay, shanqar si loo aamuso aamusnaanta, iyo maqnaanshaha qiimeynta joogitaanka. - qarsoodi - Quotes Pedia
Noloshu aad bay u macaan tahay. Murugo ayey ku qaadataa in la ogaado waxa farxaddu tahay, shanqar si loo aamuso aamusnaanta, iyo maqnaanshaha qiimeynta joogitaanka. - Qarsoodi
Noloshu waa wax lagu qoslo waana run. Ma garanayno qiimaha waxyaabaha qaarkood ilaa iyo inta aan ka lumino mooyee. Haa, hareerahaaga markaad fiiriso, waxaa laga yaabaa inaadan tan hadda garan, laakiin khadka hoose, waxaad hubtaa inaad qabsato dareenka dhabta ah ee ereyadan.
Wax qiimo ah kama qabno ilaa waqtigii aan leenahay. Waxyaabahaas ayaan u qaadnaa si fudud oo dhib yar ayeeyna dhib kala kulmaan inaan fiirino oo aan ku qiimeyno qiimahooda. Sidan ayaa ah sida maskaxdeenu u shaqeyso!
Waxaan bilownay inaan fiiro gaarno waxyaabahaas oo keliya markii aan luminno. Waxaa si sax ah loo sheegay in ay qaadato murugo in la ogaado waxa farxaddu tahay!
Weligaa kama ogaan doontid farxadda, oo xitaa ma ogaan doontid inaad ku faraxsan tahay illaa iyo inaad ka aragto marinnada iyo murugada noloshaada.
Waxaad u baahan tahay inaad la kulanto maalmo xun si aad u garato inaad ku nooleyd nolol farxad iyo nolol wanaagsan waqtigaas oo dhan.
Sidaas awgeed, waxaad awoodi doontaa inaad qirato qiimaha aamusnaanta kaliya markaad maqasho dhawaq badan oo kugu xeeran.
Tan kale, waxaa loo qori karaa sida aadan waligaa u fahmi karin sida aamusnaanta iyo deganaansha kuu deggan kuu dareensiin karo inaad dareento illaa iyo inaad ka xumaato mooyee hareerahaaga.
Sidoo kale, waxaad awoodi doontaa inaad fahanto qiimaha jiritaanka qof kuu dhow kaliya marka qofku uusan joogin halkaas.
Kaliya maqnaanshaha qofka ayaa kaa dhigi doonta inaad ogaato joogitaankiisa. Marka qof had iyo jeer ag joogo hareerahaaga, inta badan qofkaas waxaan u qaadnaa si qaddarin leh.
Tusaale ahaan, waxaan leenahay hooyade had iyo jeer anaga ayaa noo joogna, anaga oo qabana dhamaan shaqooyinka guriga, sidaas darteedna, ma garanayno jiritaankeeda ilaa iyo mooyee meel kale mooyee.
Sidan oo kale, uma qaddarinayno qiimaha shay ilaa iyo inta aan iyagu iska leh. Waxaan baran karnaa qiimaha marka qofkaasi uusan joogin.
Sidaa darteed, waa inaad had iyo jeer hubisaa inaad adigu bartaan sida loo qiimeeyo waxyaabaha ilaa ay ka joogaan noloshaada, sababta oo ah waxay macno buuxda u yeelan doontaa in la qiimeeyo iyaga marka ay baxaan.
Xigashooyin yaab leh Khamiista
Xigashooyin qurux badan nolosha
Oohinta Quusin aamusnaanta
Xigashooyinka wanaagsan ee nolosha
Xigasho farxad iyo murugo
Xigashooyin ku saabsan Fadhiga aamusnaanta
Murugo ayaa xiganeysa Sawirro
Erayada ku Saabsan Nolosha
Aamusnaanta xigashooyinka Sawirro
Xigasho xigmad xigasho ah oo kusaabsan nolosha
Erayadii Xikmadda Nolosha
Ha iloobin khaladaadka. Xusuusnow casharka. - Qarsoodi
Ha iloobin khaladaadka. Xusuusnow casharka. - xigashooyinka aan la aqoonsanayn:
Waxaan rajeyneynaa waxa ugu fiican, u diyaargarow kuwa ugu xun, oo qaado wax kasta oo kugu soo dhaca. - Qarsoodi
Waa inaad had iyo jeer rajeyneysaa waxa ugu fiican, inkasta oo ay jiraan caqabado kugu soo socda. Noloshu maaha
Ninkii caqli lahu wuxuu wax badan ka arki karaa wax ka hooseeya ceelka hoose inta nacasku ka buuxiyo buurta dusheeda. - Qarsoodi
Noloshu waxay ina siinaysaa fursado kaladuwan. Markii aan sii korayno, khibrado kala duwan ayaa na qaabeeya oo naga dhiga kuwa aan…
Ilaahow, markaan dhaawacoona, xanuunkayga bogsii. Markaan adiga kaa shakiyo, wadada i tusa. I ogeysii in xooggaagu yahay xooggayga. Iga caawi inaan maanta ku socdo Nabadda, Fahamka, iyo Jacaylka. - Qarsoodi
Ilaahow, markaan dhaawacoona, xanuunkayga bogsii. Markaan adiga kaa shakiyo, wadada i tusa. I sii…
Weligaa rajo ha lumin. Waxyaabo wanaagsan ayaa imaan doona. Goor dhaw. - Qarsoodi
Weligaa rajo ha lumin. Waxyaabo wanaagsan ayaa imaan doona. Goor dhaw. - xigashooyinka aan la aqoonsanayn: